Sidee u Aruursamaan Ilmagaleenka Xilliga Umusha Kaddib? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Miski Cabdinuur Salal — January 17, 2020
Umusha waxa ay billaalabtaa xilliga uu canugga banaanka ugu soo baxo ilmagaleenka, waana isku mid haddii qalniin lagu soo saaro iyo haddii ay hooyada caadi u dhasho.
Umusha waqti ahaan waxa aan dhihi karnaa laga billaabo marka ay hooyada dhasho illaa 6 isbuuc ee ugu horeyso, waa waqtiga ay Soomaalida u yaqanaan Afartanka.Waana xilliga ilma galeenka uu u billowda in uu dib ugu noqdo marxladiisa hore ee uu ahaa xilliga uurka ka hor.
Isbadaladda Ku Dhaca Ilmagaleenka Xilliga Umusha Waxaa Kamid:
Waxa uu ilma galeenka noqdaa mid adagg,halka uu xilliga uurka uu ahaa mid jilicsan oo kale diiqmaayey mar waliba uu cunugga weynaado.
Cabir ahaan ilma galeenka xilliga uurka waa 1000g, isbuuca koowaad ee umusha waxaa uu noqdaa 500mg, isbuuci 2aad waxa uu noqdaa culeeska ilma galeenka 350g, ugu danbeyn isbuuca 6aad ahna isbuuca umusha u danbeyo waxa uu noqdaa inta u dhaxayso 50mg-60g.
Ibbida canugga meesha ay kasoo fuqdo cabir ahaan xilliga uurka waa 7.5cm, halka xilliga umusha dhammaadkeeda ay noqoto 1.5cm. Marka ay hooyada ay dhasho islama markiiba waxaa hooyada lagu dhiiriga in ay nuujiso canugga, marka ay hooyada canugga nuujiso jirka waxa uu soo daayaa hormoono ka qeyb qaato in ilma galeenka uu dib u aruuro.
Waa muhiim in ay hooyadu heshey daryeel aad u badan xilliga umusha, waxaana kamid ah daryeelkaas:
1-Hooyada in lasiiyo cunno dheelitiran.
2- Hooyada in ay hesho nasiinno ku filan.
3- Hooyada xilliga umusha in lasiiyo daawoyin geermis dilayaal ah sababtoo ah, waxa ay u nugushahay bakteeriyo.
4- Hooyada in ay cabto biyo badan.
Tags: Sidee U Aruursamaa Ilmagaleenka Xilliga Umusha Kaddib?
Next post Napoleon-kii Carabta: Maxaad Ka Taqaan Taariikhda Boqorkii Aasaasay Sucuudiga?
Previous post Shareecada Islaamka